Isi ihe na ịkọwa nrọ dị ka akwụkwọ nrọ ndị Ijipt - Afrikhepri Fondation
Wenezdee, Septemba 29, 2021
Gee ya ntị n'isiokwu a
Akwụkwọ nrọ ndị Ijipt ma ọ bụ Papyrus Chester Beatty nyere ndepụta nke nrọ na nkọwa ha n'Ijipt (usoro iri na itoolu, ihe dịka 19 BC).
O kwesiri imata na ndi Ijipt ndi nwuru anwu na ura bu uzo abua di nso.
N'oge ụra, nwoke ahụ na-abanye n'ime oké osimiri nke ihe niile si pụta.
Ụwa esitela na oké osimiri a, dị ka mpaghara ụwa nke oge ochie, ma ọ bụ nwa nke mmiri mmiri. Otu mmewere dị ebe a iji cheta na anyị ga-achọta mgbe e mesịrị: ịga n'ihu nrọ ahụ, anyị na-edegharị n'oge gara aga, ruo mgbe anyị ka bụ ndị na-amaghị nwoke ọ bụla na-elekọta mmadụ.
E nwere ndị Ijipt 3 iche ụwa:
• ụwa anyị bi n'oge ndụ anyị n'ụwa,
• ụwa nke ndị nwụrụ anwụ, ndị mmụọ ọjọọ bi, ndị mmadụ dị iche iche,
• ụwa nke chi.
Ụra na-arụ ọrụ dị mkpa:
• imezi na nbaghari nke aru na uche,
• nweta nrọ,
• nkwurịta okwu n'etiti mmadụ na chi,
• oghere nke mmiri n'etiti ụwa atọ: ụwa dị n'okpuru, ụwa nke ndị nwụrụ anwụ na ụwa nke chi.
Isbọchị bụ ọchịchị nke ụwa a haziri ahazi, ọchịchị nke Ra, nke chi na-abara uru.
N'abalị, chi dị iche iche na-ehi ụra n'ime ụlọ nsọ ha, ihe oyiyi Chineke nọ naosị, obi nkume ma ọ bụ osisi. N'abalị jupụtara n'ihe ize ndụ na ụra na-ahụ ihe ndị dị ize ndụ ebe ụmụ mmadụ, chi na
ndị mmadụ nwere ike izute.
Ka nrọ na-ehi ụra, okwu Ijipt maka nrọ pụtara "nche" ma ọ bụ "ịkpọte".
Onye nrọ ahụ na-eteta, n'abalị, n'ụwa ọzọ.
Nrọ bụ ọnọdụ ọzọ nke ime mmụọ mmadụ maara ihe na-eme pụta.
AGBANYE NA-EBE ỌZỤ ỌZỤ
E nwere ụdị nrọ abụọ nke ndị Ijipt:
- nrọ na-atụghị anya ya, ndị na-ebili n'omume, na maka onye ọ bụla, n'abalị niile.
- nrọ nile kpaliri ime ka ha na Chineke di n'udo. Onye na-ehi ụra na-agbalị ịchọta enyemaka, iji dozie nsogbu ma ọ bụ ịghọta ọdịnihu.
• Nrọ nkịtị na igodo nrọ:
Iji dozie nrọ na-atụghị anya ya, ndị Ijipt amalitela, dịka Mesopotamia, isi maka nrọ ndị, dịka nrọ niile, na-enweghị mmasị na onye ọ bụla: echefuru onye nrọ ahụ, yana ihe ndị gbara ya gburugburu nrọ. Otú ọ dị, anyị nwere ike iji ya mee ihe iji ghọta ụzọ iche echiche nke ọha mmadụ.
Ya mere, dị ka Papyrus Chester Beatty III (2000-1785 BC) ọ bụrụ na mmadụ hụrụ onwe ya na nrọ:
- Iso nne ya n'anya, nke ọma, ụmụ amaala ibe ya ga-eso ya.
- Ịhụ mmekọahụ nke nwanyị, ihe ọjọọ, nkwụsị ikpeazụ nke nhụjuanya na-abịakwasị ya.
Ugbua isi ihe di iche iche nke ihe ndi ozo di iche iche nke agwere dika ihe oma ma o bu ihe ojoo bu ihe guzosiri ike, nkebi a gabu kwa nyocha nile nke nrọ.
• Nrọ mere:
Nrọ ndị a kpasuru iwe nwere ọrụ nke itinye ha n'ihe metụtara chi.
E nwere nrọ ka a kpaliri ka ha na chi wee banye n'udo iji nweta echiche ya. Ndụmọdụ a na-emetụta ma ọ bụ mkpebi nke nsogbu (ike, iwu ụlọ nsọ, nsụgharị, ...) ma ọ bụ ọgwụgwọ nke ọrịa, ọ bụ nrọ ngwọta metụtara ụlọ nsọ-sanatoriums.
Onye ahụ, ma ọ bụ otu n'ime ndị ikwu ya ma ọ bụrụ na ọ pụghị ịgagharị, gara n'ụlọ nsọ nke chi iji nweta nrọ echiche nke chi. Ntughari bu oru nke nwere ike ime ka mmadu nweta echiche nke Chineke.
Ndị pilgrim dinara nso ụlọ nsọ ebe chi ha rịọrọ ka ha biri.
Ọnụnọ gụnyere nkwadebe iji nwee ike ịnata echiche nke chi. Anyị nwere ike ịkọwa ụra dịka ụra na nsọpụrụ Chineke.
Ememme ezumike ndị a gụnyere nkwadebe nke uche na-etinye ha n'ọkwá ịnata ozi si nrọ.
Ndị ụkọchukwu na-arụ nnukwu ọrụ a na-akwadebe nke ga-adịru ọtụtụ ụbọchị tupu a zaa azịza ya.
Ndị Ijipt na-etinye nrọ ahụ na-agwọ ọrịa na ụlọ nsọ-sanatoriums.
N'echiche a, nrọ na-enyere aka ịga n'ihu na ndụ ma chọta ihe ngwọta iji gwọọ.
Ma onye na-ehi ụra adịghị mfe, ndị mmụọ ojo ọjọọ pụkwara ịbịaru ya nso ma merụọ ya ahụ.
A chọrọ nchebe iji chebe nsogbu ndị a. Edere ederede nchedo na papaịrọs ma ọ bụ isi ihi ụra na ihe nnọchiteanya Bes, chi na-echebe. (Image)
ỤLỌ BỤ Ọ BỤ Ọ BỤ ỤBỌRỤ
Ndị ụkọchukwu nwere ike ịkọwa ozi nke nrọ ndị ahụ ji aka ha dee dịka nkọwa nke nrọ ndị e si na Chester Beatty III.
Ndị Ijipt nọgidere na-eji usoro ịgba afa nke ndị Asiria meriri.
Ebe a na-ezukọ maka ụwa ndị a na-apụghị ịghọta aghọta na nke a na-apụghị ịghọta aghọta, nrọ ahụ mere ka ọ mara ọdịnihu na echiche nke chi. Na oge ochie, nkwụsị na ime ụlọ na ụlọ nsọ ndị Chineke kwadoro nkwurịta okwu a na chi. Ndị ụkọchukwu na-arụ ọrụ dị mkpa dị ka ndị enyi na ndị nhazi nke ozi Chineke na igodo nrọ.
Ọ bụrụ na mmadụ ahụ onwe ya na nrọ:
- N'ile anya agwo: o di nma na o bu ego
- Ọnụ jupụtara n'ala: ọ dị mma iri nri nke ndị agbata obi gị
- Na-eri anụ anụ ịnyịnya ibu: ọ dị mma ọ bụ ihe ịrịba ama nke nkwalite
- Na iru újú: ọ dị mma na ọ bụ ihe nrịbaba nke ịba ụba
- Inweta achicha di ọcha: ihe di nma bu ihe g'ebu nke gaeme ya uto
- Imere nwanne ya nwanyị ebere: ọ dị mma ọ pụtara ihe nketa
- Ikiri nwa ehi nwuru anwu: o di mma o bu onwu nke ndi iro ya
- Ịgafe mmiri site na ụgbọ mmiri: ọ dị mma ọ bụ njedebe nke nsogbu
- Ịnọdụ n'okpuru osisi: ọ bụ ezigbo iwepụ nke misfortunes
- Ndi nwuru anwu: ndu ​​di nma ka ogologo oge di n'iru ya
- Ịnọ ọdụ na anyanwụ n'okpuru osisi vaịn: ọ dị mma na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ
- Na-arụ ọrụ nkume na ụlọ: nke ọma ọ pụtara ịmepụta nwoke n'ụlọ
- Ikwanye n'ime osimiri: ọ dị mma ka a sachapụ gị pụọ na ihe ọjọọ niile
- Inwe ịhụnanya na oke ehi ga - eji obi uto na - abia n'ulo ya
- Akwanye osisi: o di mma obu ihe ngbawa nke onwu nke ndi iro ya
- Na-eri kukumba: nsogbu siri ike ga-apụta na ya
- Ile anya ya na enyo: o di nma na nwanyi ozo na-abia
- N'ile anya na miri emi nke oma o bu mkporo
- Ịhụ ọhụụ ọkara nke ndụ ya ka a ga-ewepụ
- N'ịbụ onye eji eji ejiji Asia eme ihe ọjọọ ọ ga-atụfu ọnọdụ ya
- Iri akwa ajuju ihe onwunwe ya ga ejide ya n'enweghi alaghachi
- N'ịbụ onye ajọ nkịta riri ya, a ga-aghọ onye a ghọgburu
- Ịcha akpụkpọ ụkwụ ọcha: ihe ọjọọ ọ pụtara ịwagharị n'ala
Ihe akaebe sayensị maka ịdị adị nke Chineke (Vidio)
Ihe omimi nke Indian ascet onye na-a drankụghi ma ọ bụ rie nri ruo afọ 70
United States, usoro ochichi onye kwuo uche ya nke metụtara ọnwụ
Na-asọpụrụ ndị nna nna anyị
Lusius Quietus, ọchịagha ndị Rom nke agbụrụ Africa bụ onye kpaliri ihe nkiri gladiator
Atụmatụ Shock - Akwụkwọ (2010)